टाँडी र निजगढमा भयो 'जनता लुट्ने बिजनेश'को उद्घाटन ! पैसा र पावर हुनेका विरुद्ध को बोल्ने ?
ARCHIVE, AUTO, SPECIAL » टाँडी र निजगढमा भयो 'जनता लुट्ने बिजनेश'को उद्घाटन ! पैसा र पावर हुनेका विरुद्ध को बोल्ने ?
काठमाडौं - कालोबजारी ऐन विपरित मोटरसाइकल बेचेर अकुत नाफा खाने र जनता ठग्न पल्केको बजाज यसरीनै जनतालाई ठग्ने कामलाई निरन्तरता दिन चितवनको टाँडी र निजगढमा पुगेको छ । पैसा र पावरका भर्ना जनता लुटीरहेको हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले चितवनको टाँडी र बाराको निजगढमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएपछी ती स्थानका जनतापनि ठगिने पक्कापक्की भएको छ । रत्ननगरको बकुल्लर-८ मा निशास मोटर्स र निजगढमा नित्यम ट्रेडर्स पूर्ण सुविधा सहित सञ्चालनमा ल्याएपछी यस्तो पक्कापक्की भएको हो ।